Orinasa ambongadiny fanary ambongadiny medaly fanary sy mpanamboatra | JBH Medical
Fitaovana sivana sarontava
Ny firafitry ny saron-tava dia manafina ny tarehin'olombelona. Sombiny kely maro izay manimba be antsika indrindra no hiditra amin'ny lalan-pisefoana mankany amin'ny havokavoka amin'ny elanelana misy eo amin'ny sarontava sy tarehy. Ny fitaovana sivana amin'ny ankapobeny dia lamba mekanika sasany. Ny fomba tokana hahatratrarana ny fahombiazan'ny fanakanana vovoka dia ny fampitomboana ny hateviny, ary ny voka-dratsy ateraky ny fampitomboana ny hateviny dia ny fampahatsiahivana ny mpampiasa fa lehibe sy tsy mahazo aina ny fanoherana ny fifohana rivotra. Ny lamba tsy tenona voatsabo elektrostatika dia tsy vitan'ny manakana vovo-tany be vovoka, fa ny fiampangana elektrostatika mifatotra aminy kosa dia afaka mifoka vovoka tsara amin'ny alàlan'ny fanintona elektrostatika, hahatratrarana ny fahombiazan'ny vovoka manakana. Ny hatevin'ny fitaovana sivana dia tena manify, izay mampihena be ny fanoherana ny fisefoana ny mpampiasa ary mahatsiaro mahazo aina, ka amin'izany no hahatratrarana ireo fepetra telo ilaina ho an'ny fitaovana sivana tsara izay niresaka teo aloha. Miaraka amin'ny fitaovana sivana tsara sy rafitra saron-tava natao ho siansa, namboarina ny sarontava mahomby sy avo lenta.
Ny famolavolana sarontava manohitra ny sisiny dia ny fisorohana ny rivotra tsy handalo ny elanelana misy eo amin'ny saron-tava sy ny endrik'olombelona nefa tsy hotrohina amin'ny sivana. Ny rivotra dia toy ny fikorianan'ny rano, izay kely ny fanoherana dia mikoriana aloha izy. Rehefa tsy manakaiky ny endrik'olombelona ny endrika saron-tava, dia hivoaka avy eo amin'ny tery ny zavatra mampidi-doza amin'ny rivotra ary hiditra ao amin'ny lalan-pisefoana misy ny olombelona. Ka na dia misafidy maska ​​misy fitaovana fanivanana tsara indrindra aza ianao. Tsy afaka miaro ny fahasalamanao koa izy io. Fitsipika sy fenitra vahiny maro no mamaritra fa tokony hizaha toetra ny tery amin'ny saron-tava ny mpiasa. Ny tanjona dia ny hiantohana ny mpiasa hisafidy ny saron-tava amin'ny habeny mety ary hisaron-tava amin'ny dingana marina.
Mahafinaritra ny mitafy
Amin'izany fomba izany, ny mpiasa dia ho vonona hikiry hitafy azy ireo any am-piasana sy hanatsara ny fahombiazan'ny asany. Ireo sarontava tsy misy fikojakojana any amin'ny firenen-kafa dia tsy mila diovina na soloina. Rehefa sovitra ny vovoka mankarary na simba ny saron-tava dia hoesorina. Tsy miantoka ny fahadiovan'ny saron-tava fotsiny io, fa mamonjy fotoana sy hery amin'ny fitazonana ny maska ​​ihany koa. Ambonin'izany, saron-tava maro no mampiasa endrika arched, izay tsy afaka miantoka mifanaraka tsara amin'ny endrika tarehy fotsiny, fa mitazona habaka amin'ny vava sy orona, izay ahazoana aina.
Manaraka: Famindrana marary azo entina azo ahodina ho an'ny sembana
ampinga azo esorina
saron-tava azo ampiasaina
saron-tava ho an'ny aretina
saron-tava azo ampiasaina, fandriana azo ovaina ho an'ny marary, mpamonjy marary marary herinaratra, fandriana azo ovaina amin'ny fitsaboana, mpanandratra marary hydraulic, sarontava tarehy,
fandriana azo ovaina ho an'ny marary, saron-tava azo ampiasaina, mpanandratra marary hydraulic, mpamonjy marary marary herinaratra, sarontava tarehy, fandriana azo ovaina amin'ny fitsaboana,